Iibso Thailand Teak Dhir Dabiici ah Miis Weel Qaaddo ah - Maraakiibta Bilaashka ah & Canshuur La'aanta | WoopShop®
Qaadashada Miisaaniyada Qalabka Tilmaamaysa ee Timirta ee Thailand
$ 20.99 qiimaha joogtada ah $ 28.99
Color Sanduuqa C Sanduuqa B 10pcs isqabso 07 08 05 Sanduuqa A 06 03 04 01 02
Sanduuqa C Sanduuqa B 10pcs isqabso 07 08 05 Sanduuqa A 06 03 04 01 02
Thailand Teak Dabiiciga ah Alwaaxda Miisaska Qaadada - Sanduuqa C gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Tirada Qaybaha: 7
Nooca: Qalabka Ciyaaraha Cuntada
Qalabka jikada: Kqalabka wax lagu karsado
Aaladda karinta: qalabka jikada alwaax
Qalabka jikada ee aan dhaqdhaqaaqa lahayn: Jikada Cunto karinta
Name: Isku qasidda Qaadada Pizza Shovel
Cabbirka: Sida sawirku muujinayo
Midabka: Midabka alwaax
Ka samaysan alwaax dabiici ah, khafiifa, eco-friendly iyo miridhku lahayn, oo caafimaad qaba in la isticmaalo.
Naqshadeynta qaabka quruxda badan oo leh gacmo dhaadheer ayaa u eg runtii jilicsan, oo si fudud loo xajin karo.
Ammaan in lagu isticmaalo sagxadaha kulul isla markaana loogu badbaado dusha sare ee wax lagu karsado.
7 Styles Fancy qalabka jikada guriga ee naftaada iyo asxaabtaada.
Si sahlan loo daryeelo - gacanta ku dhaq saabuun fudud ama biyo, ku kaydi meel qalalan.
Loogu talagalay: guri, maqaayad, iyo jikada
Xirmooyinka waxaa ka mid ah: 1 x Qaadida Wooden
Fiiro gaar ah: Farqiga u dhexeeya iftiinka iyo shaashadda awgood, midabka shayga ayaa waxoogaa ka yara duwanaan kara sawirrada. Fadlan u oggolow 1-2 cm kala duwanaansho sababtoo ah cabbirka gacanta.
Qaadooyinku waa kuwo aad u fiican, oo si taxaddar leh loo farsameeyay, oo siman, oo qurux badan in gacmahaaga lagu hayo. La karinta iyaga ayaa ah wax lagu farxo!
helay set oo hal qaaddo ayaa dhexda ku jabay, way cadahay in midii horeba jabtay asal ahaan ay ka buuxiyeen.